Halkan ka daawo sawirro taariikhiya oo ay SDWO soo qaadeen waa doorashadii golah deegaanka 28 nov 2012 | Somaliland Hargeisa City
Halkan ka daawo sawirro taariikhiya oo ay SDWO soo qaadeen waa doorashadii golah deegaanka 28 nov 2012
28 November, 2012 — somaliland1991
Xasan Waraabacade oo ka codeynaya xaafada Cabaaye
Gudoomiyaha SDWO Guled A. Sheekhaash oo ku guda jira kormeerka goobaha codbixinta
Hargeysa ayaa laga codeynayey 404 goobood iyadoo wadarta guud ee dalka oo dhan laga codeynayey 1800 oo goobood.
Doorashada oo si habsami ah u socotay ayaa waxa garabsocday oo foolxumeeyay qabsoomida doorashada golaha deegaanka iyadoo ay socotay ku celcelin badan oo dadku u dhexeeyeen inay codeeyaan 5 ilaa 10 jeer, isagoo khadka la isku calaamadinayey uu ahaa mid si fudud la iskaga maydhi karo, iyadoo dadku ay caagado yaryar ku wada siteen jaafeelkii dharka lagu maydhayey.
Afhayeenka Gudida Dooroshooyinka Axmed Maxamed Xirsi Geelle oo aanu khadka telephone ka kula xidhiidhnay isagoo ku sugan magaalada Borama ayaa sheegay hadii ay jirto in codadka lagu celceliyay ay aad uga xunyahiin, isla markaasna sheegay in khadkan ama rijigani uu yahay kuwa ugu wanaagsan ee aduunka la isticmaalo oo ay ka keeneen dalka shiinaha.
Goobaha codbixinta intooda badan ayay warqadaha codbixintu ka dhamaadeen wixii ka danbeeyay 2dii duhurnimo, iyadoo goobo aanu soo marnay 4tii galbnimo sida Jaamacada hargeysa, Ayaxa, Xarunta agoomaha, khayriyda iyo xarumo kale oo badan oo dhamaantood saacado ka hor ay ka go,een warqadaha codbixintu
Guud ahaan doorashadan ayaa ku suntanaandoonta doorashadii ugu xumeyd ee soo marta taariikhda Somaliland oo ku sifooday doorasho fowdo ah oo lagu 10 jeer noqday oo aan waxba la kala qarsanin oo si badheedh ah loogu celcelinayey. waxa laga dareemidoonaa tirada guud ee codbixiyaasha oo dorashdii madaxweynaha ahayd 4 boqol oo kun, hase yeeshee tan hada la filayo inay hal milyan iyo badh ay kor u dhaafto maadaama lagu celceliyey.
Saaka salaadii hore ayaan guud ahaa ku soo wareegnay magaalada Hargeysa oo ay idhaahagu qabanayaa safaf aad u dhaadheer oo ay codbixiyayaashu taagan yahiin, iyadoo loo kala saaray safafka raga iyo dumarka. Dadka qaar ayaa xalay u hayday safafka si aan looga horeyn codbixinta.
Guud ahaan waxa la mamuucay isku socodka baabuurta dalka oo dhan, iyadoo ay socdaan baabuur ay numbaro gaar ah siiyeen gudida dooroshooyinka qaranka ee Somaliland. Guud ahaanba waxa maanta madhan wadooyinka magaalada Hargeysa oo baabuur la ciirciiri jirtay.
Goobaha kale ee aan booqanay waxa ka mid ah, tuulooyinka Awbarkhadle iyo Haleeya oo dhinaca bariga ka xiga magaalada Hargeysa. Goobaahaas oo dhan waxay doorashadu uga socotay si nabadgelyo ah.
Maadama ay doorashada lagu geliyay diiwaangelin la,aan waxa si dhib yar aad u arkaysay dadka oo ku noqnoqonaya codbixinta iyadoo dadk qaar ku taamayaan inay codeeyaan in ka badan 10 jeer. Waxa iyadana mid aad loola yaabo ah khadka ama rinjiga qofka lagu calaamadinayo oo si dhibyar la iskaga maydhi karo, Waxaan idhahayga ku aragnay goob dadku horteed iyagoon kaba fogaan ay ku buuqsanyahiin oo ay iska maydhayaan khadkii la mariyey.
Maxamed Dheer oo soo dhiibtay Codkiisii
Xaafada Jameeco weyn
Wadada 150 ka ee magaalada Hargeysa
Dariiqyada Hargeysa oo maanta cidlo ahaa oo aan baabuurta loo ogoleyn
Basas dad ku soo daabulayey tuulada Awbarkhad leh
Guled Abdi Sheekhaash – SDWO Chief Editor – Hargeis
Doorashada Beri ka dhicidoonta guud ahaan Somaliland iyo Daad guraynta codbixiyayaasha oo heerkii ugu danbaysay maraysa
SDWO (Hargeisa 27/11/2012) Iyadoo maalinta berito ah loo dareeridoono dooroshooyinka golaha deegaanka ayaa waxa magalaada Hargeysa maanta ka anbabaxayey oo ay indhaahaagu qabanayeen baabuur raran oo dad lagaga guranayo magaalada Hargeysa oo ku sii jeeda Berbera, Balaygudbadle, Borama iyo Gebiley.
Maanta subaxadii ayaanu booqanay goobta state house kii hore oo ay degan yahiin kumanaan danyari ahi, halkaasi oo aanu kula kulanay basas farobadan oo dhextaagan goobtan oo dhalinyaro aad u da,a yar lagu gurayo oo loo daad guraynayey Balaygubadle iyo Berbera, mar aanu wax ka weydiinay dadkii goobtaas ku sugnaa ayaa noo xaqiijiyey in basaskani ay wataan xildhibaano ka sharaxan Kulmiye iyo Rays.
Dhinaca kale xalay fiidkii waxa magaalada Hargeysa ka baxay basas iyo baabuurta waaweyn ee xamuulka qaada oo sida dad aad u fara badan oo uu kaxaystay Maayarka magaalada Berbera Cabdale sandheere oo ka sharaxan xisbiga Kulmiye.
Maanta mar aanu khadka telephone ka kula xidhiidhnay magaalada Berbera ayaa waxa naloo sheegay in ay magalaadu aad u buux dhaaftay oo ay la ceeryoomayso codbixiyayaal laga soo daadgureeyay magaalada Hargeysa.
ex-State House – dhalinyaro basas lagu gurayo
Dhalinyaradaas ku sugan Berbera ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen in raashinku uu gabaabsi ku noqday magaalada madaama ay makhaayadahii dabooli kariwaayeen baahiyaha dheeraadka ah ee dadkan lagu soo daad gureeyay magaalada, iyadoon laga fakirin cuntadooda. Waxaana la sheegayaa in Roodhi badan looga qaaday magaalada Hargeysa.
Dhisamayaasha dadka danyarta ah ee State House kii hore
Dhinaca kale mar aanu booqanay maanta duhurkii xarunta gudida dooroshooyinka qaranka ayaa waxa ka socday dhaqdhaqaaqyo badan iyadoo ay goobta diyaar ku ahaayeen baabuurtii waaweeynayd ee qaadaysay sanaadiiqda codbixinta, iyo baabuurtii qaadaysay goob joogayaasha.
Xarunta komishanka dooroshooyinka ayaa ahayd mid qasan oo ay jahawareer ka abuurayeen ciidankii loogu talogalay inay ilaaliyaan amniga, oo iska hortaagayey in qof qudhi u gudbo gudaha xarunta, iyagoo xataa aan qadarinaynin dadka haysta aqoonsiga ay ku gelikaraan gudaha xaruntan, ama iyagoo iska dhego marinayey amarka ay bixinayeen gudida dooroshooyinku. Waxaan la kulanay nin darawel ah oo gaadhigiisu ku jiray gudaha xarunta oo ay saarnaayeen sanaadiiqdii codbixintu hase yeeshee ciidanku ka hor istaageen inuu gudaha u galo si uu gaadhigan iyo sanaadiiqda saaran uu u kexeeyo.
Dhismaha weyn ee xarunta gudida dooroshooyinka qaranka
Baabuur u diyaar ah inay qaado sanaadiiqda codbixinta
Baabuur sida sanaadiiq iyo goobjoogayaal oo u anbabaxay Sheekh Mooldhe iyo Dhaboolaq
Albaabka hore ee xarunta gudida dooroshoyinka qaranka
Guled Abdi Sheekhaash – SDWO Chief Editor – Hargeisa
U diyaar garowga maalinta doorashada iyo kala iibsiga cod bixiyayaasha oo cirka isku sii shareeraysa
SDWO (Hargeisa 26/11/2012) Guud ahaanba waxa loo diyaar garoobayaa maalinta cod bixinta ee doorashada golaha deeganka oo dalka oo dhan hal mar ka wada qabsoomidoonta maalinta arbacada ee 28ka November 2012.
Shalay oo bisha November ahayd 25 ayaa la soo gebogebeeyay ololahii doorashada ee bisha ay soo wadeen 7 urur ee u tartamaya sidii ay u noqon lahayeen sedexda urur ee loo aqoonsado xisbi qaran.
Waxa tan iyo xalay magaalada Hargeysa ka dareemaysay ururada siyaasada oo bilaabay xodxodasho ay rabaan inay ku kasbadaan codadka shacbiga, iyadoo aad arkayso dad sidii xoolaha baabuur lagu gurayo oo la geeynayo goblada kale ee dalka sida Berbera iyo Borama. Xalay maqribkii ka dib ayaa la sheegayey baabuur badan oo lagu guray dhalinyaro oo loo qaaday Berbera si ay ugu codeeyaan musharaxa ka kaxaystay Hargeysa.
baabuur codbixiyayaal ka qaaday Hargeysa kuna sii jeeda Boorama
Maanta mar barqadii aan marayey wadada dhinaca galbeed uga baxda magaalada Hargeysana waxaan kula kulmay babaska caasiga oo siday dhalinyaro ay u daadguraynayaan Borama, iyagoo markaa shidaal ka qaadanayey kaalin shidaal oo aan kula kulmay oo la yidhaah Indho Birta.
Wararku waxay intaa ku darayaan in kala iibsiga dadka codaynaya ay cirka isku sii shareerayso iyadoo la sheegayo dilaaliin ku dhex wareegaya musharaxiinta kuna bayactamaya waxaan hayaa 2000 oo qof oo kuu codeeya ee imisaad bixinaysaa.
Agagaarka xafiiska gudida dooroshooyinka oo aad mashquul u ahaa
Basaska magaalada ayaa aad u wada mashquul ah iyadoo ururadu ay wada kiraysteen si ay dad uga guraan magaalada Hargeysa iyo kuwo dhinaca xadka ibootiya ka ka soo talaabindoona.
Dhinaca kale gudida diiwaangelinta ayaa maanta soo saaray amar ah in maalinta doorashada aan la ogolaandoonin wax baabuur ah dalka oo dhan soconaya inta u dhaxaysa 6 subaxnimo ilaa 8da fiidnimo, tani oo dhibaato weyn ku keenidoonta isku socodka xaafadaha kala duwan ee magaaalooyinku ka koobanyahiin, isla markaasna saameyn weyn ku yeelandoonta dhaqaalaha dadka ganacsatada iyo muruqmaalka ah.
Waxaan weli la hubin awooda uu leeyahay khadka dadka codeeya lagu calaamadindoono iyadoo aad looga werwerqabo inay dhacdo vote ka oo lagu celceliyo, maadama ay jiraan dad u diyaar ah inay lacag ku qaataan inta jeer ee ay codeeyaan.
Waxa maanta guud ahaanba mashquul ahayd xarunta gudida dooroshooyinka oo lagu kala dirayey shaqaalahii iyo goob joogayaasha ka qaybqaadanaya doorashada.
Share on Facebook Share on Facebook Share on Facebook
« Halkan ka daawo sida magaalada Burco looga codeeyey
Falastiin oo xubinimo sare loo aqoonsaday »